Iran Oo Shaacisay Waqtiga Ay Israel Dunida Kaga Tirtiri Doonto - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaIran Oo Shaacisay Waqtiga Ay Israel Dunida Kaga Tirtiri Doonto
Iran Oo Shaacisay Waqtiga Ay Israel Dunida Kaga Tirtiri Doonto
Tehran (Jigjigaonline) – Dawladda Iran ayaa ku dhawaaqday inay muddo kooban dunida kaga tirtiri doonto waddanka Israel, isla markaana la waayi doono dadka Yuhuudda ah ee dhibaatada badan ku haya Muslimiinta bariga dhexe, kuwaas oo uu Maraykanka iyo reer Galbeedku ay difaacooda u taagan yihiin.
Iran waxay sheegtay in saacad badhkeed ay ku qaadan doonto inay burburiso gebi ahaanba Israel oo ay ka masaxdo khariidadda dunida, haddii uu Maraykanku isku dayo inuu weerar kusoo qaado.
Guddoomiyaha Guddi-hoosaadka Ammaanka Qaranka iyo Siyaasadda Arrimaha dibedda ee Baarlamaanka Iran, Mojtaba Zolnour oo u warramay wakaaladda wararka Mehr News Agency, ayaa waxa uu sheegay in haddii uu Maraykanku go’aansado inuu weeraro kusoo qaado gudaha dalka Iran, taas oo suurtogalnimadeedu sii badanaysay muddooyinkii dambe.
“Haddii Maraykanku nasoo weeraro, kaliya saacad badhkeed ayay nolosha Israel sii jiri doontaa.” Sidaas ayuu yidhi Mojtaba Zolnour oo Isniintii hadlayey.
Dhinaca kale, madaxweynaha Iran, Hassan Rouhani ayaa Maraykanku ku eedeeyey inuu khatar halis ah gelinayo, falal xasilloonida ka dhan ahna uu ka wado gobolka Gacanka.
“Dawladda Maraykanku labadii sannadood ee ugu dambeeyey, waxay ku xad-gudbaysay nidaamka iyo qawaaniinta adduunka, waxaanay isticmaalaysay dhaqaalaheeda, lacagteeda iyo ilaheeda milateri, waxaanay qaadday tallaabooyin daandaansi ah oo halis ku ah degenaanshaha gobolka iyo adduunkaba.” Ayuu yidhi Madaxweyne Rouhani.
Madaxweynaha Iran waxa uu ku eedeeyey Maraykanka inuu iskaga baxay heshiiskii Nukliyeerka Iran ee sannadkii 2015 ay quwadaha dunidu gaadheen, waxaanu hoosta ka xariiqay in Washingtodn ay meel kaga dhacday qaraarradii Golaha Ammaanku ku ogolaaday heshiisyadii Tehran lala galay.
Hadalka Madaxweyne Rouhani iyo Xildhibaan Mojtaba Zolnour ayaa waxay yimaaddeen toddobaad kaddib markii ay Iran soo ridday diyaarad aan duuliye lahayn oo Maraykanku leeyahay, taas oo keentay in Donald Trump uu amar ku bixiyo in la duqeeyo Iran, balse daqiiqado kaddib ka laabtaay.
WARBIXIN MUHIIM AH: Maxaad Ka Taqaannaa Waddanka Uu Madaxweyne Muuse Biixi Booqashada Ku Tegay, Maxayse Somaliland Ka Faa’iidi Kartaa?
Somaliland oo kor u qaaday dedaallada ay ku xoojinayso aqoonsi caalami ah